Tan Brown Granite Slabs Tiles Countertops Exporter Manufacturer - အိန္ဒိယ
Tan ကဘရောင်းကကျောက်တဲ့ Tan ကနှင့်အညိုရောင်ဖြစ်ပါသည် အိန္ဒိယကနေကျောက်. ဒီကျောက်၏နောက်ခံချောကလက်နှင့် Tan အရောင် crystals နှင့်အတူအညိုရောင်မှောင်မိုက်ဖြစ်. ဤသည်ကျောက် Telangana ၏အိန္ဒိယပြည်နယ်မှ. A beautiful and sophisticated brown granite for use in home and office. Tan ကဘရောင်းကကျောက်မီးဖိုချောင်ကောင်တာများအောင်များအတွက်အကြိုက်ဆုံးရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်, ရေချိုးခန်းအုတ်ရိုးနားမှာကြွပ်, မီးဖိုချောင်ကြွေပြားများ, နှင့်အခင်း. Tan ကဘရောင်း၏အဓိကအသုံးပြုမှုမီးဖိုချောင်ကောင်တာ၌တည်ရှိ၏. စျေးနှုန်းဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ Tan ကဘရောင်းကကျောက်အတွက်ရရှိနိုင်လေးကိုသွန်းရှိပါတယ်. Tan ကဘရောင်းကကျောက်ကောင်တာများ, ပြားနှင့် 24×24, 12×12, 18×18 အုပ်ကြွပ်အကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူရရှိနိုင်ပါ.
ဒါ့အပြင်အဖြစ်လူသိများ ဘရောင်းနှင့် Tan ကျောက်
အပြီးသတ် အရောင်တင်, Flamed
အသုံးပြုခြင်း အခင်း, ကောင်တာများ, မြို့ရိုးကိုကွက်များ
tiles အရွယ်အစားကိုအောက်ပါအတွက်ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရရှိနိုင်ပါသည် :
TBPCT60x30 ပိုလန်စံကိုက်ညှိ 610x305x10 မီလီမီတာ (2412 ကျောက်ကွက်များ×)
TBPCT60x60 ပိုလန်စံကိုက်ညှိ 610x610x12 မီလီမီတာ (2424 ကျောက်ကွက်များ×)
TBPCT30x30 ပိုလန်စံကိုက်ညှိ 305x305x10 မီလီမီတာ (1212 ကျောက်ကွက်များ×)
TBPT60x30 ပွတ်ကွက်များ 60x30x2 စင်တီမီတာ - အသင့်ဖြစ်ပြီလားစတော့အိတ်
TBPT60x40 ကွက်များ 60x40x2 စင်တီမီတာပွတ် - အမိန့်ထဲမှာ
TBPT40x40 ကွက်များ 40x40x2 စင်တီမီတာပွတ် - အမိန့်ထဲမှာ
TBPT60x60 ကွက်များ 60x60x2 စင်တီမီတာပွတ် - အမိန့်ထဲမှာ
ငါတို့သည်လည်း၏အထူနှင့်အတူ Tan ကဘရောင်းကကျောက်အတွက် 18 "x18" ၏အုပ်ကြွပ်နှင့် 400mm x ကို 400mm ချက်တွေကိုအုပ်ကြွပ်အောင် 20 မီလီမီတာနှင့် 10 မီလီမီတာ.
ဒါကအလွန်အားကောင်းတဲ့အိန္ဒိယတောင်ပိုင်းကျောက်ဖြစ်ပါသည်, ဒီကျောက်မျိုးစုံအသုံးပြုမှုရှိပါတယ်. သငျသညျတစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါဝယ်နိုင်, အုပ်ကြွပ်, ငါတို့လက်မှ Tan ကဘရောင်းကကျောက်၏ကောင်တာများ.
Tan ကအညိုရောင်ကျောက်ထွက်ရှိအကျော်ကြားဆုံးအညိုရောင်ကျောက်တို့တွင်. မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, it becomes very obvious that brown minerals which give this rock its name are far more varied in color than when seen from afar. အညိုရောင်သတ္တုဓာတ်နှင့် ပတ်သက်. ဖွင့်ပါစေနှင့်အမျှ 50% သို့ 60% အဆိုပါကျောက်ထု, ဒီအံ့သြဖွယ်အကျိုးသက်ရောက်မှုဖန်တီး. The brown spots can vary from nearly metallic copper brown in color through to dark chocolate brown in some sections. အဆိုပါမဲမှောင် Brown ယေဘုယျအားဖြင့်လျော့နည်းဘုံများမှာ, နှင့်ခြုံငုံအသွင်အပြင်ယေဘုယျအားဖြင့်အလင်းကြေးနီအညိုရောင်၏ဖွစျလိမျ့မညျ.
The darker browns simply accentuate the already spectacular color. သငျသညျကြောကျကိုမှအတော်လေးနီးစပ်ရပြီးတာနဲ့သင်ကကျောက်၌အလင်းအညိုနှင့်အနက်ရောင်များပေါင်းစပ်ပါလိမ့်မယ်. Depending upon howanotice that there are tiny little quartz crystals embedded in segments that stone was polished some of. အလင်း၏ထုပ်မျက်နှာပြင်၏ချွတ်လက်လက်တောက်တဲ့အခါမှာသူတို့ကကျိန်းသေအနည်းငယ်ထွန်းလင်းသို့မဟုတ်တောက်ပနေငါပေးမည်. အဆိုပါလင်းကျောက်မရှိရင် tan အညိုရောင်ကျောက်လူမျိုးများအရသာများအတွက်အနည်းငယ်လည်းမှောင်မိုက်ခြင်းနှင့် overpowering ဖြစ်စေခြင်းငှါ,, so it’salittle too dark and overpowering for many peoples tastes, ဒါကြောင့်. ဤကွီးစှာသောကျောက်အားတို့သည်ကြီးစွာသောနည်းနည်းများအပြင်ရှိတယ်. သငျသညျရံဖန်ရံခါသောကျောက်၏ဓာတ်သတ္တုအကြောင်းအရာအတွက်အပြောင်းအလဲ၏အရာကယ့်ကိုမတွေအများကြီးတစ်တစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါရှာတွေ့စေခြင်းငှါ,.
5 ပေါ်အခြေခံကာ 11 မဲ